अक्सर सोधिने प्रश्नहरू - MediaLight बायस प्रकाश
के टिभीको साथ बत्तीहरू अन र अफ हुन्छ?
यो धेरै मानिसहरु लाई भ्रमित गर्दछ। जवाफ टिभी मा निर्भर गर्दछ र वास्तव मा रोशनी संग केहि गर्न को लागी छैन। यदि USB पोर्ट बन्द हुन्छ, रोशनी शक्ति हराउनेछ।
धेरै टिभी को लागी, यो हुनेछ। जे होस्, यदि तपाइँ एक को मालिक हो सोनी Bravia टिभी, तपाइँ एक MediaLight रिमोट कन्ट्रोल जस्तै एक workaround को उपयोग गर्न को लागी जाँदै हुनुहुन्छ (MediaLight Mk2 फ्लेक्स सहित) ब्राभिया को USB पोर्टहरु को कारण गलत व्यवहार गर्नुहोस्। यदि तपाइँ संग एक छुट्टै एक कनेक्ट बक्स संग एक सैमसंग टिभी छ, USB पोर्ट या त बन्द गर्दैन, र नयाँ टिभीहरु समय समय मा बाहिर आउँछ कि अप्रत्याशित कार्य। सैमसंग र एलजी जस्ता केहि टिभीहरु लाई कहिले काहिं टिभी बन्द भए पछि बत्ती बन्द गर्न को लागी केहि मिनेट लाग्छ। यो प्यानल को जीवन विस्तार गर्न को लागी प्रयोग गरीरहेका प्रक्रियाहरु सहित, कारणहरु को एक संख्या को कारण हो।
जे होस्, यदि तपाइँको टिभी तपाइँको USB लाई पावर बन्द गर्दछ जब TV बन्द हुन्छ, तपाइँको MediaLight हुनेछ बन्द गर्नुहोस् जब यो शक्ति गुमाउँछ।
र, हो! प्रत्येक एक dimmer कि हामी बेच्ने लगातार स्मृति छ। यसको मतलब यो हो कि जब पावर लाईट मा बहाल हुन्छ, प्रकाश पहिले सेट ब्राइटनेस स्तर फिर्ता आउनेछ।
तपाइँ आफ्नो सार्वभौमिक रिमोट वा आईआर ब्लास्टर संग स्मार्ट हब को लागी रिमोट कन्ट्रोल आदेश सिकाउन सक्नुहुन्छ प्रक्रिया स्वचालित गर्न वा हाम्रो उत्कृष्ट वाइफाइ dimmers को एक किन्न ताकि तपाइँ एलेक्सा वा गुगल होम लाई बत्तीहरु लाई खोल्न भन्न सक्नुहुन्छ (तपाइँ होमकिट को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ तर यो HomeBridge को उपयोग को आवश्यकता छ)।
के मिडियालाइट पूर्वाग्रह प्रकाश रंग परिवर्तन गर्दछ?
होइन। हाम्रो एकमात्र फोकस सही निर्माण गर्दै छ, सन्दर्भ-गुणवत्ता भिडियो सेतो पूर्वाग्रह प्रकाश, डेस्क बत्तीहरू, फिक्स्चर र बल्बहरू.
हामी कुनै रंग परिवर्तन गर्ने उत्पादहरू बनाउँदैनौं किनकि हाम्रो लक्ष्य भनेको तपाईंको टिभीमा रंगहरू बृद्धि गर्नु होतपाईको भित्तामा होईन। Bयसको मतलब यो होइन कि हाम्रो बत्तीहरू तपाईंको ठाउँ परिवर्तन गर्न सक्षम छैनन्। हाम्रो शक्तिशाली नक्कल D65 सेतो पूर्वाग्रह प्रकाश तपाईं प्रसन्न हुनेछ किनभने यो तपाईंको टिभी को लागि उत्तम दृश्य वातावरण प्रदान गर्दछ।
हाम्रो सिफारिश? हेर्ने वातावरण बढाउनुहोस्। संतुष्टि, टिन्ट र रंग तापमानमा परिवर्तनको कारण विचलनहरू न थप्नुहोस्।
यदि तपाइँ तपाइँको प्रदर्शन क्यालिब्रेट गर्न समय र पैसा खर्च गर्नुभयो भने, तपाइँ सचेत हुनुहुन्छ कि पूर्वाग्रह बत्तीहरू परिवर्तन हुन्छन् रंगहरू वा गलत सेतो पोइन्ट प्रयोग गरेर "असमान"पर्यवेक्षकको दृष्टिकोणबाट तपाइँको प्रदर्शन।
हाम्रो बत्तीहरूले तपाईंको भित्ता परिवर्तन गर्ने र colors्गहरू बनाउँदैन, तर उनीहरूले स्क्रिनमा रंगहरूमा पनि प्रतिकूल असर पार्दैन जस्तो रंग परिवर्तन गर्ने बत्तीहरू गर्दछ।
यदि तपाईं पूर्वाग्रह बत्तीको साथ आफ्नो प्रदर्शन बृद्धि गर्न चाहानुहुन्छ जसले तपाईंको स्क्रिनमा र contrast्ग र कन्ट्रास्टको कथित गुणस्तर सुधार गर्दछ, जबकि आँखा थकान कम गर्दछ र छवि प्रतिधारण रोक्न, तपाईं सही ठाउँमा आउनुभयो। मिडियालाइट सटीकता, विश्वसनीयता र उचित मूल्य निर्धारणको लागि पोष्ट-प्रोडक्शन पेशेवरहरू र उपभोक्ताहरू द्वारा एक समान पहिचान गरियो।
शुभ समाचार यो हो कि हाम्रो उच्च निर्माण गुणले लामो जीवनकालमा परिणाम दिन्छ। जहाँ कमोडिटी एलईडीको आयु लगभग १ बर्ष हुन्छ, प्रत्येक मिडियालाइट स्ट्रिपको war बर्षको लागि ग्यारेन्टी हुन्छ, पुरानो क्लिचि चित्रण गर्दै, "एउटा किन्, एकचोटि रो।"
के तपाइँ अमेजन मा तपाइँको रोशनी बेच्नुहुन्छ?
जबकि केहि अन्तर्राष्ट्रिय डीलरहरु अन्तर्राष्ट्रिय अमेजन वेबसाइटहरुमा बेच्न सक्छन्, हामी Amazon.com मा MediaLight वा LX1 बेच्दैनौं। हामी हाम्रो ग्राहकहरु लाई सीधै बेच्न र हाम्रो सूची र लिस्टिंग मा नियन्त्रण गर्न मनपर्छ। अवश्य, तपाइँ अझै पनी हाम्रो वेबसाइट मा अमेजन पे संग तिर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाइँ चाहानुहुन्छ, तर हामी अमेजन मा हाम्रा उत्पादनहरु बेच्दैनौं।
मेरो अर्डर आउन कति समय लाग्छ?
सुपर-फास्ट! Of 99% समय, युएसए अर्डरहरू १-२ दिनमा आइपुग्छन्!
हामी सबैलाई थाहा छ, USPS एक तातो गडबडी अहिले छ। हामीले निर्णय गर्यौं कि हामी सेवा को स्तर प्रदान गर्न सक्दैनौं कि हामीले प्रस्ताव गर्न को लागी यदि हामी भयानक हुलाक वितरण समय मा भरोसा गर्न को लागी।
अब, हामी संयुक्त राज्य अमेरिकामा फेडएक्स २-दिन र विश्वको बाँकी विश्वको लागि फेडएक्स प्राथमिकता इन्टरनेसनलद्वारा सबै अर्डर गर्दछौं।
हामी नयाँ जर्सीमा आधारित छौं र न्यू जर्सीबाट हाम्रो अर्डरहरू जहाज गर्दछ। अर्डरहरू दिउँसो २ बजे अगाडि राखिएको अर्डरहरू सोही दिनमा पठाइन्छन्।
यूरोपियन आर्थिक समुदाय, क्यानडा र मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ताइवान, ह Hongक Kongका प्राय: अर्डरहरू पनि २- days दिनमा आउँछन्। हामी glo दिन भित्र सम्पूर्ण विश्वमा पठाउँदछौं।
हामी जहिले पनि भ्याप र सीमा शुल्क सँग हाम्रो शिपिंग मूल्यमा समावेश अन्तर्राष्ट्रिय आदेशहरू पठाउछौं। तपाईं वितरण मा अरू केहि eणी छैन! हामी तपाईंको शपिंग फिर्ताको लागि निश्चित गर्नेछौं यदि यो ढिलो आइपुगेमा, जब सम्म हामी फेडएक्स ग्यारेन्टी फिर्ताको लागि योग्य हुनेछौं। यदि यो हरायो भने, हामी तुरुन्तै एक प्रतिस्थापन पठाउने छौं!
के म कम रंग रेन्डरिंग बत्तीको तुलनामा साँच्चिकै भिन्नता देख्दछु?
हो। हामी उनीहरुलाई बनाउन को समस्या को माध्यम बाट जाने छैन यदि उनीहरु छवि गुणस्तर सुधार गर्दैनन्। एक कम गुणस्तरीय प्रकाश अन्तर्गत छाला टोन र त्यसपछि फेरि एक CRI 98 MediaLight पूर्वाग्रह प्रकाश वा बल्ब अन्तर्गत हेर्नुहोस्। प्रकाश स्रोतहरु कि महत्वपूर्ण रातो स्पेक्ट्रम को अभाव सही देख्दैनन् जब छाला टोन को प्रतिबिम्बित। प्रदर्शन क्यालिब्रेशन को एक धेरै महत्त्वपूर्ण भाग यो सुनिश्चित गर्दै छ कि छाला टोन प्राकृतिक देखिन्छ।
ट्रान्समिसिभ डिस्प्लेको साथ (जस्तै एक टिभी), प्रकाश प्रदर्शनको बाहिर प्रतिबिम्बित हुँदैन, तर दृश्य वातावरणमा परिवेश प्रकाशको गुणहरू अझै पनि एक छ उल्ट्याउन हामी प्रदर्शन मा के देख्छौंमा असर गर्दछ।
यो समान छ कि तातो प्रकाशले टिभीलाई पनि नीलो देखिन्छ, वा धेरै म्यान्जेटाको बत्तीहरूले छवि हरियो देखाउँछ। तर क्रोम्याटीटी निर्देशांकको प्रकार्यको सट्टा, वर्णक्रान्ति अनुकूलन प्रकाश स्रोतको वर्णक्रमीय ऊर्जा वितरणको कारण हुन्छ।
जब हामी ब्यक्तिलाई गलतका साथ छाँटकाँट गर्छौं, प्रदर्शन पनि अशुद्ध देखिन्छ, तर विपरित दिशामा।
भ्रामक? आईफोन र एन्ड्रोइड फोनहरू अब कोठाको सेतो पोइन्टमा सेटिंग्स कसरी मिलाउने भन्ने बारे सोच्नुहोस्। यदि तपाइँ ट्रू टोन वा "अनुकूलन प्रदर्शन" सक्रिय वा निस्क्रिय गर्नुहुन्छ भने, प्रदर्शनको सेतो पोइन्ट नाटकीय रूपले परिवर्तन हुन्छ, यसले तपाईँलाई देखाउँदछ कि एम्बियन्ट प्रकाशले स्क्रिनको बारे तपाइँको धारणालाई कत्ति स्थानांतरित गर्यो। यदि तपाईं ती सेटिंग्स को उपयोग गर्नुहुन्न भने, प्रदर्शन प्रकाशमा तातो वा चिसो लाग्न सक्छ, प्रकाश मा निर्भर गर्दछ।
किनकि त्यहाँ खराब र missing्ग रेन्डरिंग लाइटमा हराइरहेका र lowहरू छन् (कम सीआरआईको रूपमा सामान्यीकृत), वर्णक्रमीय कमीहरूले हामी प्रदर्शनमा ती समान र colors्गहरू कसरी महसुस गर्छौं भन्ने कुरालाई असर गर्न सक्छ। हाम्रो रेटिनामा अधिक रंग-सेन्सिंग शंकुहरू अन्य प्राइमरीहरू भन्दा रातो हेर्नको लागि समर्पित छन्, र रातो, हरियो र निलो सबपिक्सेलहरू देखाउँदछ।
थप रूपमा, प्रकाश स्रोतहरू जुन रातो छैन त्यसको लागि पहेंलो बत्ती प्रयोग गरेर उनीहरूको लक्ष्य सेतो पोइन्ट (पहेँलो + निलो = कम सीआरआई व्हाइट) प्राप्त गर्न। हामी पहेँलो / हरियो प्रकाशको लागि धेरै संवेदनशील हुन्छौं, जसले आंशिक रूपमा बुझाउँदछ किन ती बत्तीहरू खराब र color्गको रेन्डरिंगको साथ अक्सर घाम जस्तो देखिनुको सट्टा पहेंलो र हरियो देखिन्छ।
म रिमोट कन्ट्रोल मा रातो बत्ती देख्न सक्दिन, के तपाइँ मलाई एक मृत ब्याट्री पठाउनुभयो।
होइन, तपाईं रिमोट कन्ट्रोलमा अवरक्त एलईडी देख्न सक्नुहुन्न किनकि यो छ अवरक्त। रिमोट कन्ट्रोल दृश्यात्मक रूपमा प्रकाश हुँदैन। मिडियालाइटले रेडियो फ्रिक्वेन्सी रिमोट प्रयोग गर्दैन। जब तपाई बटन थिच्नुहुन्छ यो दृश्य रूपमा उज्यालो हुँदैन।
भ्रमको अंश हाम्रो वास्तविक रिमोटहरू आरएफ थिए र दृश्यता रूपमा प्रकाश गरे भन्ने तथ्यका कारण हो। अन्तिम आरएफ रिमोटहरू year बर्ष भन्दा पहिले पठाइएको थियो।
यदि तपाईंको रिमोट कन्ट्रोलले सोचेजस्तो काम गरिरहेको छैन भने हामी 99% निश्चित छौं यी समाधानहरू मध्ये एक तपाईंको समस्या समाधान हुनेछ।
के year बर्षे वारेन्टी अन्तर्गत कभर गरिएको छ?
सबै कुरा कभर गरिएको छ।
"बेसमेंटमा बाढी आयो र यसले मेरो होम थियेटर पनि यसैसँग लग्यो।"
हाम्रा ग्राहकहरु यस मा हामीलाई फिर्ता हुनेछ; हामीले वारेन्टी दावी कहिल्यै अस्वीकार गरेका छैनौं। हामी गुणात्मक कम्पोनेन्टहरू प्रयोग गर्छौं र हाम्रो पूर्वाग्रह बत्तीहरू अन्तिममा निर्माण गरिन्छ।
जे होस्, यदि केहि गल्ती भयो भने, हामी तपाईंलाई तपाईले हामीलाई किन छान्नुभयो भनेर सम्झाउने मौकाको रूपमा हेर्छौं। यदि हामीले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्‍यो भने, हामी प्रयोग गर्ने उच्च गुणवत्ता, ISF- प्रमाणित कम्पोनेन्टहरू प्रयोग गरेर हामी मरेका छौं। जहाँसम्म, हामीले बुझ्यौं कि बजारमा एउटा प्वाल थियो जब यो सटीकता, गुणस्तर र सेवाको हो।
हामी दाबी कभर छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन भन्दा बरु राम्रो बत्तीहरू बनाउनमा ध्यान केन्द्रित गर्छौं। (यसको मतलब यो होइन कि प्रतिस्थापन भागहरू पठाउनु अघि तपाईले बत्तीहरू पाउनुभयो भनेर प्रमाणित गर्न हामी सोध्ने छैनौं)।
मात्र चेतावनी त्यो हो यदि तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिकाको बाहिरी ठाउँबाट अर्डर गर्नुहुन्छ, जहाँ हामीसँग एक स्थानीय वितरक छ, तपाईंलाई प्रतिस्थापन भागहरूका लागि मानक USPS प्रथम श्रेणीको अन्तर्राष्ट्रिय प्याकेज मेल भन्दा छिटो केहि पनि तिर्न भनियो।
(मिडियालाइट डेस्क लैम्प र लाइट बल्बको year बर्ष / ,3०,००० घण्टा ग्यारेन्टी छ)।
म MediaLight Mk5 फ्लेक्स वा ग्रहण को लागी year बर्षे वारंटी चाहन्न भने म कम तिर्न सक्छु?
मानिसहरू समय-समयमा यो प्रश्न सोध्छन्। हामी वारेन्टीको लागि अतिरिक्त शुल्क लिदैनौं। हामी5बर्षे वारंटी प्रदान गर्दछौं किनकि हाम्रो उत्पादनहरू कम्तिमा5बर्षसम्म ईन्जिनियर गरिएका छन्। यदि हामीले वारेन्टी समावेश गरेनौं, हामी अझै पनि उत्पादनको लागि समान रकम चार्ज गर्नेछौं। यो कसरी डिजाइन गरिएको हो भनेर धेरै लामो समय सम्म आशा गरिन्छ, त्यसैले हामी तपाईंलाई ग्यारेन्टी दिन्छौं कि तपाईंले पाँच बर्षको लागि अर्को प्रतिशत तिर्नु पर्दैन।
के प्रकाशहरू अघिल्लो चमक तह सम्झन्छन् जब तिनीहरू बन्द हुन्छन्?
हो, उनीहरु गर्छन्। प्रत्येक रिमोट कि हामी प्रस्ताव गर्छौं कि कम उत्पादनहरु को विपरीत।
अमेजन र अलीबाबामा मिडियालाइटले किन सस्तो बत्तीहरू भन्दा बढी खर्च गर्दछ?
यदि तपाइँ एक पूर्वाग्रह प्रकाश को लागी अनुमान लगाउनु पर्दैन कि खोजिरहनुभएको छ, तब अरु केहि नहेर्नुहोस्। ग्यारेन्टी-MediaLight असफल बिना सबै समय मा सही र सटीक परिवेश प्रकाश संग प्रयोगकर्ता प्रदान गर्न को लागी डिजाइन गरीएको हो! न केवल हाम्रो मूल्यहरु किफायती छन् तर हाम्रो वारंटी तपाइँको MediaLIght लामो समय पछि ती सस्ता बत्ती ल्याण्डफिल मा समाप्त हुनेछ। तपाइँ प्रतिस्थापन भागहरु वा अर्को पूर्वाग्रह प्रकाश फेरि (5 बर्ष सम्म) किन्नु पर्दैन।
हामी क्रोमेटीटी र रंग रेन्डरिंगमा सटीकताका लागि कस्टम कलरग्रेड एसएमडी चिप्स प्रयोग गर्छौं। ती अन्य बत्तीहरू गर्दैनन्। यसको मतलब यो होइन कि तिनीहरू शिविरमा राख्न वा तपाईंको बेसमेन्ट सीढीलाई प्रकाश दिनका लागि खराब बत्तीहरू हुन्, यसको मतलब यो हो कि तिनीहरू तपाईंको क्यालिब्रेटेड डिस्प्ले पछाडि पूर्वाग्रह प्रकाशको लागि उपयुक्त छैनन्।
२०२० मा मिडियालाइटको लागि न्यूनतम रंग रेन्डरिंग सूचकांक (सीआरआई) ≥ Ra Ra रा र टीएलसीआई is 2020 हो। हाम्रो पहिलो वर्ष (२०१ 98) मा, हाम्रो बत्तीहरू १ 99 १ भन्दा बढी थियो। हाम्रो मिडियालाइट प्रोसँग अत्यधिक ठोस CRI Ra 2015 रा र १०० को TLCI छ।
त्यो कति सहि छ? कोही भन्छन् कि तिनीहरूलाई सूर्यबाट अलग गर्न मिल्छ। हामी त्यो भन्न सक्दैनौं, तथापि, एक स्पेक्ट्रोफोटोमिटरको साथ, हामी सूर्यबाट कुनै पनि मानव-निर्मित प्रकाश स्रोतलाई छुट्याउन सक्छौं। यो, तथापि, धेरै, धेरै राम्रो छ। असाधारण।
हाम्रो चिप्सको गुणवत्ता बाहेक हामी सबै कुरा समावेश गर्दछौं जुन तपाईंलाई आदर्श पूर्वाग्रह प्रकाश व्यवस्थाको लागि आवश्यक पर्दछ। हामी एक डिम्मर, एक रिमोट कन्ट्रोल (टिभी मोडेलमा) साथ साथै तार प्रबन्ध क्लिपहरू र तपाईंको स्थापनाको लागि वेल्क्रो स्ट्र्यापहरू समावेश गर्दछौं।
हामी प्राय सस्तो विकल्प हुने छैनौं, तर हाम्रा मार्कअपहरू अवरेय चिप्स, सस्तो पीसीबी र डिमरहरू जस्ता बिल्कुल आवश्यक सुविधाहरू बिना नै बनाउने विक्री प्रणालीहरूको तुलनामा अधिक विनम्र हुन्छन्। भविष्यमा तपाईले आफ्नो मिडियालाइट राम्रोसँग प्रयोग गर्नुहुने छ, कम गुणस्तरको बत्ती पछि ल्याण्डफिलमा छ। वरिपरि सोध्नुहोस्। तिमिले देख्ने छौ। हामी हाम्रो वारेन्टी अन्तर्गत सबै कुरा कभर गर्छौं किनभने मिडियालाइट ट्या like्की जस्तै बनाइएको छ।
के म सस्ता बत्तीहरूको तुलनामा साँच्चिकै भिन्नता देख्नेछु?
के तपाईं क्यालिब्रेटेड डिस्प्ले हेर्न चाहानुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने, तपाईं मिडियालाइट पूर्वाग्रह लाइट्स सटीक गर्दा तपाईं भिन्नता देख्नुहुनेछ। असम्भव जस्तो देखिन्छ जस्तो, क्यालिब्रेट डिस्प्ले पछाडि गलत बत्तीहरू राख्नु अत्यावश्यक प्रदर्शनलाई "असम्बन्धित" गर्दछ किनकि यसले हामीले हेर्ने कुरामा एक घटाउ प्रभाव पार्छ। यदि तपाईं कठोर निलो, कम सीआरआई लाइटहरू टिभीमा राख्नुहुन्छ भने, तपाईंको छवि तपाईंको आँखामा न्यानो देखिनेछ।
टिभीको साथ र colors्ग परिवर्तन गर्ने बत्तीहरूको बारेमा तपाइँ के सोच्नुहुन्छ?
के तपाईं भित्तालाई र colorful्गीन देखिन चाहानुहुन्छ, वा तपाईं तस्वीर विस्तार गर्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ? हाम्रा ग्राहकहरु भित्तामा टक लगाउँदैनन्। तिनीहरूले धेरै बरु पर्दा मा सामग्री हेर्न चाहन्थे।
तर हामी यहाँ तर्क गर्नका लागि छैनौं। तपाईं के खरीद गर्न चाहानुहुन्छ खरीद गर्नुहोस्। लाइट ब्लीड भनेको त्यस्तो चीज हो जुन प्राय जसो व्यक्तिले मेटाउन कोशिस गर्छन्, जोड्दैन। सब भन्दा नराम्रो अवस्थाहरूमा, यसले तस्विरलाई डिस्च्युरेट भएको र रंगहरू विरलै टिभीसँग मिल्दछ। अझै नराम्रो कुरा, यो प्राय: सुस्त रहन्छ। यदि तपाईं हामी जस्तो ओसीडी प्रकारका हुनुहुन्छ (ग्राहकको हाम्रो # १ प्रकार, वैसे), यसले तपाईंलाई केरा ड्राइभ गर्न सक्दछ। त्यहाँ गलत फेला पार्न धेरै छ। यो ध्यान भंग गर्ने छ।
जहाँसम्म, यदि तपाईं यस किसिमको र that्गीन बत्तीहरूमा पैसा खर्च गरिरहनु भएको छ भने हामी तर्क गर्छौं कि तपाईं बक्सको लागि बढि ठूलो मुस्कान लिनुहुन्छ र ठूलो प्रदर्शन खरीद गरेर पर्खाल स्पेसको समान मात्रामा कभर गर्नुहोस्। एक 65 "-90" प्रदर्शनको साथ, चित्र धेरै इमर्सिभ छ। जब फिलिप्सले २०० 2004 मा एम्बीलाइट सुरू गरे, टिभीहरू करीव 40० "-50०" मा बाहिर जाँदै थिए। त्यहाँ अझै केही खाली पर्खाल रहेको थियो - त्यो एउटा बहाना होईन, तर रंगीन बत्तीहरू 85 टिभीमा मूर्ख देखिन्छन् "" यदि तपाईंसँग 14 फिट छत छैन भने।
के तपाईका बत्तीहरूले र changeहरू परिवर्तन गर्छन्? के तिनीहरू तातो सेतो छन्? के तिनीहरू शान्त सेतो छन्?
होइन। सबैजनाको राय के हुन्छ राम्रो लाग्ने बारे। हामीसँग विज्ञान र मापदण्डहरू छन्। हाम्रो बत्तीहरू द्वारा प्रमाणित छन् इमेजिंग विज्ञान फाउंडेशन। प्रत्येक MediaLight। Most 32.95 Mk2 Eclipse बाट हाम्रो सब भन्दा महँगो इकाईहरूमा ISF प्रमाणित छ।
यदि तपाईं सन्देश फोरममा हेर्नुहुन्छ भने, तपाईं शान्त सेतो, तातो सेतो र इन्द्रेणी रंगको पूर्वाग्रह बत्तीहरूको बारेमा पढ्न सक्नुहुन्छ जब सम्म तपाईंको आँखा चम्किदैन। यदि तिनीहरू मध्ये कसैले उनीहरूले गर्नुपर्ने कुरा गरे भने, हामी हाम्रो लाइटहरूको लागि पर्याप्त अधिक एउटा चार्ज लगाउँन सक्ने थिएनौं (वास्तवमा: हाम्रो निर्माण लागत उनीहरूको भन्दा बढि छ खुद्रा मूल्य र हाम्रो नाफा मार्जिन धेरै कम छ)।
यदि तपाईं एक पेशेवर र color्ग कलाकार हो, हामी तपाईंको लागि मिडियालाइट बनाए। यदि तपाइँ होम थियेटरको बारेमा ख्याल राख्नुहुन्छ र क्यालिब्रेट डिस्प्लेको मूल्य जान्नुहुन्छ भने, हामी तपाइँको लागि मिडियालाइट बनाउँदछौं।
हामी धेरै उत्कृष्ट उच्च सीआरआई (---98 Ra रा) निर्माण गर्छन CIE मानक Illuminant D99 (65K; x = 6500, y = 0.3127) अनुरूप ("सन्दर्भ मानक" भिडियो सेतो) पूर्वाग्रह लाइटहरू पेशेवर र उपभोक्ता बजारको लागि र तिनीहरूलाई बेच्दछौं। धेरै उचित मूल्य र एक year बर्षे वारंटी संग।
सन्दर्भ पूर्वाग्रह प्रकाश भनेको चित्रलाई निर्देशकको अभिप्राय जस्तो देखिने बनाउनु हो। हामी केहि भन्दा कम अस्पष्ट छौं - यदि तपाइँ र walls्गको बत्तीहरू आफ्नो भित्तामा फ्ल्यास गर्न चाहानुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई तिनीहरूबाट बाहिर कुरा गर्ने कोशिश गर्दैनौं। सबै पछि, त्यहाँ स्वादको लागि कुनै लेखा छैन।
यद्यपि प्रदर्शनको पछाडि र राख्दा प्रदर्शनमा के हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा परिवर्तन हुन्छ। यो केवल हाम्रो आँखाहरू र दिमागले कसरी काम गर्दछ। डिरेक्टरी पछाडि सुन्तला र रातो जस्तो रातो रंगले पर्दाको सबै चीज ब्लर देख्नेछ। चिसो र temperature्ग तापक्रम नीलो जस्तो छ, सबै चीज अधिक रातो देखिन्छ। हेर्दा यो विपत्तिजनक नहुन सक्छ यो Bachelorette, तर तपाइँ तपाइँको रingरिंग सुइटमा वा हेरिरहेको बेला गर्न चाहनुहुन्न खराब ब्रेकिंग।
मिडियालाइट बायस लाइट्स सटीक D65 हो?
मिडियालाइट बायस प्रकाश प्रणालीले एक प्रदान गर्दछ अति सटीक D65 सिमुलेशन। जब तपाइँ मार्केटि language भाषा पढ्नुहुन्छ कि "सही" वा "निरपेक्ष" D65 को वादा गर्नुहुन्छ, बुझ्नुहोस् कि यो मात्र वर्तमान एलईडी टेक्नोलोजी संग सम्भव छैन।
कुनै वास्तविक D65 प्रकाश स्रोतहरू छैनन्, केवल सिमुलेटरहरू। एक सिम्युलेटरको गुणस्तर CIE मेटामेरिजम अनुक्रमणिकाको साथ मूल्या .्कन गर्न सकिन्छ। पूर्ण स्पेक्ट्रम, अल्ट्रा-उच्च सीआरआई कलरग्रेड ™ एलईडी हाम्रो मिडियालाइट बायस लाइट्समा वर्तमानमा उपलब्ध भएको उत्तम प्रतिनिधित्व गर्दछ।
हामी कम्पनीहरूबाट थोरै सावधान छौं जसले उनीहरूको उत्पादनलाई "उत्तम" वा "सटीक D65" कल गर्छन् र अधिक चार्ज गर्न र यस अभ्यासमा संलग्न हुन चाहँदैनन्। हाम्रो उत्पादनहरू उद्योग मापदण्ड अनुरूप छन्। हामी कत्तिको राम्ररी स्ट्याक अप गर्छौं भन्नेमा हामी खुसी छौं र इमेजि Science विज्ञान फाउन्डेशन सहमत छ। हामी ISF- प्रमाणित छौं र हाम्रो बत्तीहरू र color्ग सटीकता र स्थिरताको लागि परीक्षण गरिएका छन्। हामी अन्डरप्रोमीज र ओभरडिभर ​​गर्न रुचाउँछौं।
किन मेरो लुमू मीटरले मलाई नाप दिन्छ जुन -300००-5000-XNUMX०० के द्वारा बन्द छ (दुबै दिशामा?)
LUMU अनुसार निर्माता समर्थन पृष्ठहरू, Lumu उपकरणमा कम सीसीटी मापन 300००K भन्दा बढी बन्द गर्न सकिन्छ र उच्च सीसीटी मापन 3000०००K सम्म अफ गर्न सकिन्छ। हाम्रो बत्तीहरू two 6500०० केमा ती दुई चरमको बिचमा छन् र हाम्रो बेनिंग विवरणहरू छन् धेरै Lumu उपकरण को सहनशीलता भन्दा कडा।
सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, हामी क्षमाप्रार्थी छौं यदि तपाईं आफ्नो Lumu मा गलत परिणामहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो बत्तीहरू उत्पादन प्रक्रिया भर समीक्षा गरिन्छ, र इमेजिंग विज्ञान फाउन्डेशनको प्रयोगशालामा स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित हुन्छ। हामी हाम्रो बत्तीहरू परिमार्जन गर्दैनौं ताकि तिनीहरू मीटरको विशेष मोडलमा फरक तरिकाले नाप्न सक्दछन् र त्यहाँ यस्तो कारकहरू छन् जुन प्रयोगशाला वातावरणको बाहिर लिइएको मापनलाई असर गर्न सक्छ।
केहीले सोधेका छन्, "किन तिनीहरू एक मिटर बनाउँछन् जुन सटीक मापनको लागि असक्षम छ?" हाम्रो उत्तर यो हो कि परिशुद्धता, केहि फाँटहरूमा, सापेक्षिक हुन्छ र तरंगदैर्ध्य रs्ग तापमान र स्पेक्ट्रल पावर वितरणको विभिन्न दायरामा पर्दछ, जुन केहि उपकरणहरू द्वारा अधिक सही मापन गर्न सकिन्छ।
फोटोग्राफीमा, २ eye०० के र २2300०० के बीचको भिन्नता मानव आँखामा 2400 6500०० के र 7000००० के बीचको भिन्नता भन्दा बढी देख्न सकिन्छ र फिल्ममा टंगस्टन-आधारित वा बराबरको प्रकाशको प्रयोग सामान्यतया 3200२००--5000००० के दायरामा हुन्छ। यो Lumu वेबसाइट को आधारमा हो, जहाँ Lumu जस्तो उपकरणहरूमा नतीजा सबैभन्दा सहि हुन्छ।
हाम्रो उत्पादन र परीक्षण प्रक्रियाहरूमा प्रयोग गरिएको मिटरहरू, तथापि, C २०० आईफोन डोंगल भन्दा उच्च सीसीटी दायरामा अधिक सटीक मापन गर्न सक्षम छ। जबकि एक बत्तीले तपाईंलाई नतीजा दिन्छ जुन यी मध्ये कुनै एकमा 200 6500०० के नजिक छ, उपकरण लाइट्सको वर्णक्रियाय पावर वितरणको बारेमा धारणामा निर्भर छ जुन यसको मापन रिजोलुसन र क्षमता भन्दा बाहिर छ।
तपाईंको पूर्वाग्रह बत्ती कतिवटा लुमेन उत्सर्जन गर्दछ? के तिनीहरू HDR डिस्प्लेको लागि पर्याप्त उज्ज्वल छन्?
5v 1a प्रकाश लगभग 400 लुमेन को सैद्धांतिक अधिकतम चमक भन्दा बढी हुन सक्दैन। यो हुनु भन्दा अलि उज्यालो छ, र तपाईले अझै पनि आफ्नो बत्तीहरू डिम गर्न आवश्यक पर्नेछ सन्दर्भ स्तर प्राप्त गर्नका लागि। ठूला vv स्ट्रिपहरू केवल ठूलो क्षेत्रमा मात्र प्रकाश फैलाउँदछन् - तिनीहरू केही अपवादहरू सहित उज्यालो हुँदैनन्। उदाहरण को लागी, एक inch इन्च पट्टी inch इन्च पट्टी भन्दा उज्यालो हुनेछ।
यदि तपाईंलाई उज्यालो बत्तीहरू चाहिन्छ भने, हाम्रो l०० ल्युमेन मेडियालाइट बल्ब वा हाम्रो १२v र २vv प्रकाश स्ट्रिप्सले अझ बढी चमक प्रदान गर्दछ। यद्यपि हाम्रो १२v स्ट्रिपहरू लगभग बेसी राम्रोसँग यूएसबी-संचालित बत्तीहरूको रूपमा बेच्दैनन् किनकि थप चमक चाहिएको छैन र धेरै व्यक्तिहरू टिभीबाट पावर मन पराउँछन्।
हाम्रो MediaLight एकल पट्टी लगभग एक सैद्धांतिक अधिकतम आउटपुट गर्दछ 400 लुमेन (LED२ एलईडी लगभग २०lm प्रत्येकमा)। यो एक लोकप्रिय फ्लोरोसेंट पूर्वाग्रह प्रकाश आउटपुट के बराबर हो। हामी केवल 42०20० (xx5050 मिलिमिटर) एलईडी मात्र प्रयोग गर्छौं, सानो र कमजोर55२3528 (x.xx२mm मिमी) विविधता होइन। यी वस्तु एलईडी स्ट्रिपहरू होइनन्। तिनीहरू एलईडीको साथ निर्मित छन् जुन हामी स्रोत गर्दछौं। त्यहाँ, यद्यपि चमक सीमितताहरू जब USB पावरको बन्द चलिरहेको छ। जहाँसम्म, अधिकांश पूर्वाग्रह प्रकाश डिम्मरको साथ चलाइएको छ, तपाईं सामान्य प्रयोगमा यी सीमितताहरूको सामना गर्न सक्नुहुन्न।
हाम्रो मिडियालाइट क्वाड लगभग परिणामहरू L०० लुमेन अधिकतम चमकमा। त्यहाँ, यद्यपि, चमक सीमितताहरू जब यूएसबी पावरको बन्द चलिरहेको छ। जहाँसम्म, अधिकांश पूर्वाग्रह प्रकाश डिम्मरको साथ चलाइएको छ, तपाईं सामान्य प्रयोगमा यी सीमितताहरूको सामना गर्न सक्नुहुन्न।
एचडीआरको सम्बन्धमा, हो तिनीहरू पर्याप्त उज्यालो छन्। एचडीआर भिडियोले उज्यालोपना क्षेत्रहरू प्रयोग गर्दछ भिडियो भिडियो वास्तविकता जस्तै हेर्नको लागि। मिडियालाइटले एक HDR प्रदर्शन पूर्वाग्रह प्रकाशको लागि आउटपुट आवश्यकताहरू पार गर्‍यो।
के मिडियालाइट मेरो राक्षस "85" टिभीको लागि पर्याप्त शक्तिशाली छ?
हो। यो पक्का छ। तपाईंले सम्भवत: समावेश टाढाको डिमरसँग यसको मधुरो पार्न आवश्यक पर्दछ। यदि तपाइँको टिभी भित्ते माउन्टमा छ भने तपाइँ सायद m मिटर वा m मिटर एमके २ फ्लेक्स चाहानुहुन्छ।
मेरो जीवनसाथीले मलाई पर्खाल सेतो वा खरानी रंगको तटस्थ छायादार रंगाउन दिदैन, तपाई के सिफारिस गर्नुहुन्छ?
यो धेरै राम्रो काम गर्दछ। :)
सबै गम्भीरता मा, त्यहाँ अन्य समाधानहरु छन्, जस्तै एक तटस्थ पृष्ठभूमि (पर्खाल क्लि or्ग वा कपडा) TV को पछाडि राख्नु जस्तै। तर, रंग को रंग वास्तव मा यसको विपरीत प्रकाश को रंग मा कम प्रभाव छ
के स्ट्रिप्स काट्न सकिन्छ?
हो, तपाईं मिडियालाइट स्ट्रिपमा कहिँ पनि तामा सम्पर्कहरू बीच काट्न सक्नुहुन्छ।
के मिडियालाइट पूर्वाग्रह प्रकाशले निलो प्रकाश छोड्छ?
होइन। हाम्रो पूर्वाग्रह लाइटहरू वास्तवमै standardK०० के र हाम्रो मानक मिडियालाइट मोडेलहरूको लागि ≥ C C सीआरआई र हाम्रो मिडियालाइट प्रो लाइनको लागि 6500 Ra रा हो। कहिलेकाँहि हामी सोच्छौं कि एलईडी पूर्वाग्रह प्रकाश निर्माणकर्ताहरूले 98 99०० के मा केवल अनुमान लगाउँदछन् किनकि हाम्रो परीक्षणहरूको दौरान मापन विश्वव्यापी र उत्कृष्ट खराब थियो। हामी हाम्रा सबै कम्पोनेन्टलाई अत्याधुनिक इन्स्ट्रुमेन्टेशनको साथ प्रमाणित गर्छौं र त्यसपछि हामी यो सुनिश्चित गर्छौं कि प्रकाश स्ट्रिपहरू जोड्दा हामी तिनीहरूलाई गडबड गर्दैनौं। यी एक्वैरियम प्रकाश स्ट्रिपहरू पूर्वाग्रह लाइटहरूको रूपमा पुन: प्याकेज गरीरहेका छैनन्।
एउटा कारण हामी किन सेतो पट्टीको सट्टा कालो पट्टी प्रयोग गर्दछौं, जुन अझ बढी दक्ष हुनेछ, कि सेतो स्ट्रिप्सले कालो पीसीबी स्ट्रिपहरू भन्दा रंगको तापमानमा अधिक हस्तक्षेप गर्न सक्दछ, विशेष गरी उनीहरूको उमेरको रूपमा। (इलेक्ट्रोनिक्सको सेतो फिनिश हेर्नुहोस् जुन कुनै पनि समयको लागि बाहिर बस्दछ)।
विज्ञहरू सहमत छन् कि पूर्वाग्रह प्रकाश गर्नुपर्छ एक धुंधला दिनमा सूर्यको किरणको रंग बन्नुहोस्, वा केहि CIE D65 मानक प्रबुद्ध भनिन्छ। हाम्रो अंश प्रकाश उत्सर्जक डायोडहरू नाप्नका लागि हामीले क्यालिब्रेटेड फोटो रिसर्च स्पेक्ट्रास्केन PR-650 र Sekonic C7000 प्रयोग गर्‍यौं। हाम्रो साझेदारहरू त्यसपछि तिनीहरूलाई PR-670 हाम्रो परीक्षणहरू प्रमाणित गर्न परीक्षण गर्नुहोस्।
यदि एक राम्रो समाधान अवस्थित छ भने, हामी मिडियालाइटको साथ बजारमा आएका थिएनौं। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, बजारमा अन्य कुनै पनि एलईडी-आधारित लाइट किटहरू 6500०० के पनि नजिक आउँदैनन्, उनीहरू टिनमा जे भन्छन् बावजुद। हामीले परीक्षण गरेका अन्टेक प्रकाश 9500 20,000 ०० के भन्दा माथि थियो, जुन व्यावहारिक रूपमा आकाश निलो छ। अर्को लोकप्रिय ब्रान्ड २०,००० भन्दा बढि डरलाग्दो थियो! हाम्रो 6500K, र हामी यो मतलब छ। तिनीहरूलाई छेउछाउमा राख्नुहोस् र आफ्नै लागि हेर्नुहोस्। अझ राम्रो, तिनीहरूलाई तटस्थ खरानी कार्डमा चम्काउनुहोस् र क्यालिब्रेटेड प्रोबको साथ नाप लिनुहोस्। तपाईं प्रसन्न हुनेछ।
हाम्रो बत्तीहरू घर प्रयोगको लागि मात्र पर्याप्त छैनन्, ती पेशेवरहरूले प्रयोग गर्छन् जसले हाम्रो घर थिएटर प्रणालीहरूमा भिडियोहरू र color्गीन ग्रेड गर्दछन्। वास्तवमा, यदि तपाईंसँग खाताको साथ व्यवसायिक हुनुहुन्छ भने फ्ल्याण्डर्स वैज्ञानिक, हामी उनीहरूबाट मिडियालाइट किन्न सिफारिस गर्दछौं।
तपाईंको LEDs को रंग रेन्डरिंग अनुक्रमणिका (CRI) के हो?
२०२१ को रूपमा, हाम्रा सबै एलईडीहरुमा कम्तीमा Ra Ra रा को CRI छ। हाम्रो लोकप्रिय MediaLight प्रो 2021 Ra को एक CRI छ - एक उद्योग पहिलो।
के तपाईको बायस लाइट्स D65 अनुरूप हुनुहुन्छ?
हाम्रो पूर्वाग्रह बत्तीहरू एकदम सटीक छन् - वास्तवमा फ्लोरोसेंट पूर्वाग्रह प्रकाश समाधान भन्दा बढी सटीक - एक उच्च सीआरआई र 6500K को एक सहसंबंधित रंग तापमानको साथ।
जे होस्, हामी विश्वास गर्दैनौं कि बजारमा कुनै पनि पूर्वाग्रह प्रकाश, हाम्रो आफ्नै सहित, D65 को रूपमा मार्केटिंग हुनु पर्छ। CIE D65 मानक प्रबुद्ध अलिक अलि अप्ठ्यारो आकाशमा सूर्यको किरणबाट लिइएको हो। हाम्रो विचारमा, कुनै पनि कृत्रिम पूर्वाग्रह प्रकाश "नक्कल D65" हो, र प्राकृतिक सूर्यको प्रकाश भन्दा भिन्न वर्णक्रिया उर्जा वितरण हुन्छ।
हो, हो। एक सीईडी सीआईई D65 मानक प्रबुद्ध अनुकरण गर्न सक्षम छ को हदसम्म, MediaLight एक धेरै सटीक समाधान हो। अवश्य पनि, तपाईं तुरून्त एक फ्लोरोसन्ट वा एलईडी प्रकाश स्रोत स्पेक्ट्रोफोटोमिटर अन्तर्गत चिन्नुहुनेछ। राम्रोसँग फिल्टर गरिएको (अधिक अवरक्त हटाउने) टung्गस्टन हलोजन बल्ब D65 को स्पेक्ट्रल पावर वितरणको नजीक हुनेछ, तर फारम कारक, तातो आउटपुट, उर्जा अयोग्यता र छोटो आयु टुंगस्टन बल्बहरूको प्रयोगलाई सीमित गर्दछ।
म एक डिमर बिना मिडियालाइट किन्न सक्छु?
के तपाइँ एक dimmer बिना MediaLight प्रस्ताव गर्नुहुन्छ?
एक शब्द मा, छैन, तर यो किनभने राम्रो पूर्वाग्रह प्रकाश समायोजित गर्न को लागी आवश्यक छ (यद्यपि, तपाइँ एक dimmer बिना LX1 किन्न सक्नुहुन्छ, किनभने dimmers एक ला कार्टे को पेशकश गरीन्छ)।
SMPTE सिफारिश अभ्यास कागजात भन्छ कि टिभी पछाडिको सतह बाहिर प्रतिबिम्बित एक पूर्वाग्रह प्रकाश को चमक दृश्य उपकरण मा चोटी सेतो स्तर को १०% भन्दा कम हुनु पर्छ। एक डिम्मर बिना, एलईडी पट्टिहरू स्पष्ट चमकदार छन्। यो कुचल कालो, एक चरम हेलो प्रभाव र पहिलो ठाउँमा पूर्वाग्रह बत्ती को उपयोग को फाइदा केहि उपेक्षित गर्न को लागी परिणाम हुन सक्छ।
थप रूपमा, त्यहाँ परिस्थितिहरू छन् जहाँ तपाईं टिभीको पछाडि सेतो पर्खाल हुन सक्छ सिफारिस गरिएको तटस्थ खैरोको सट्टा। बत्तीहरूको चमक समायोजन गरेर तपाईं यो निश्चित गर्न सक्नुहुन्छ कि तिनीहरू परिवेशको प्रकाशको लागि अधिकतम सिफारिश गरिएको चमक भन्दा बढि छैनन्।
अन्य प्रणालीहरू, जस्तै फ्लोरोसेंट पूर्वाग्रह प्रकाश प्रणाली अस्पष्ट छैन, तर बफल्स र / वा तटस्थ घनत्व फिल्टरको साथ संयोजनमा प्रयोग गरिन्छ रोशनको आदर्श स्तर प्राप्त गर्न।
रिमोटको तार अत्यन्तै छोटो देखिन्छ ...
रिमोट कन्ट्रोल वायरलेस छ। :-) तपाईं के हेरिरहनु भएको छ यो डिमर मोड्युलको तार हो। लम्बाइले फरक पार्दैन किनभने रिमोट कन्ट्रोल १ 15 फिट टाढाबाट काम गर्दछ। त्यहाँ अतिरिक्त feet फिट तार सिसाको छ जुन बत्तीसँग जोड्दछ। एक पटक तपाईले डिम्मर मोड्युललाई जोड्नु भएपछि तपाईले फेरि यसको टच गर्नुपर्दैन।
के तपाइँ अमेजन मा तपाइँको उत्पादनहरु बेच्नुहुन्छ?
हामी अमेजनमा हाम्रो सक्कली मिडियालाइट उत्पादनहरू बेच्यौं। त्यो हो, हामीले COVID-19 महामारी मरे सम्म। त्यसो भए, कुनै पनि अर्डर जुन आवश्यक मानिएको थिएन गम्भीर ढिलाइ भयो। -०-30० दिन ढिलाइ सामान्य थियो।
यस बीच, सबैजना घरमा अडिएर, नयाँ टिभीहरू र सहायक उपकरणहरूको माग बढ्यो, तर हाम्रो अमेजन आदेशहरू अन्तमा दृश्यात्मक भए। हामीले महसुस गर्यौं कि अब हामी अर्को कम्पनीमा हेर्न सकिने छैनौं। हामी हाम्रो उखानको अन्डा सबै एक लौकिक बास्केटमा हाल्छौं।
हामीले हाम्रो उत्पादनहरू अमेजनबाट हटाउने र त्यसलाई सिधै बेच्ने निर्णय गर्यौं। हाम्रो कार्यालय बन्द भएपछि, हामी हाम्रो ग्यारेजबाट ढुवानी गरियो र युएसपीएस, यूपीएस र डीएचएलद्वारा दैनिक सम्पर्कविहीन पिकअपको लागि व्यवस्था मिलायौं।
प्रक्रियामा, हामीले सिक्यौं कि धेरैजसो मानिसहरू थिएनन् खोजी गर्दै
जब हामी जुलाईमा नयाँ Mk2 श्रृंखला जारी गर्‍यौं, हामीले यो निर्णय गर्‍यौं कि हामी यसलाई केवल हाम्रो साइटमा र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय अधिकृत डीलरहरू मार्फत प्रस्ताव गर्दछौं। यो कम तनावपूर्ण छ र हामी हाम्रा ग्राहकहरूलाई चिन्छौं धेरै राम्रो हामीसँग धेरै वेब च्याटहरू, फोन कलहरू र भिडियो कलहरू छन् (यदि तपाईंलाई एक हात आवश्यक छ भने हामी स्थापना अघि तपाईंको सेटअप हेर्नेछौं) जसले हामीलाई ग्राहकहरूले कसरी हाम्रा उत्पादनहरू प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने बारेमा हामीलाई सिकाउँछ। हामी राम्रो सल्लाह र सेवा पनि प्रदान गर्दछौं।
तपाईको कम्पनीको बारेमा के छ? पूर्वाग्रह प्रकाश स्थानमा तपाइँ के विशेषज्ञता ल्याउनुहुन्छ?
BiasLighting.com को एक प्रभाग हो दर्शनीय प्रयोगशालाहरू। २०० in मा स्थापित, हामी ब्रिट्नी र मुन्सिल बेन्चमार्कका प्रकाशकहरू हौं। त्यो भन्दा पहिले, हाम्रो संस्थापकहरूले अर्को दशकको लागि उही उद्योग र भिडियो क्यालिब्रेसन उद्योगमा काम गरे, डिजिटल भिडियो आवश्यक प्रकाशनहरू। त्यसोभए, तपाईं भन्न सक्नुहुनेछ कि हामी जिउँदछौं र हामी गर्छौं सबै थियेटर सन्दर्भ मापदण्डहरू लिन्छौं। हाम्रो विशेषताको लागि धन्यवाद हामीसँग केही उत्कृष्ट इमेजिंग वैज्ञानिकहरूको डोमेन विशेषज्ञता, साथै केही वास्तवमै मस्त प्रयोगशाला उपकरणहरू छन्।
पूर्वाग्रह प्रकाश स्पेस विगत केही दशकहरूमा एक राम्रो निन्द्रापूर्ण सम्बन्ध भएको छ। केहि उज्यालो स्पटहरू बाहेक, जस्तै हाम्रो मनपर्नेहरू - अहिले बन्द गरिएका आइडियल ल्युम (फ्लोरोसन्ट) बत्तीहरू, बजारमा प्रायः उत्पादनहरू कि त किहलिएका, सस्तो फोहोर, वा अत्यधिक मूल्यवान फोहर थिए। हामी फ्लोरोसन्ट प्रणालीहरूको शुद्धता मन पराउछौं तर LED को सुविधाको साथ शुद्धतालाई मिलाउन चाहन्छौं।
सबै सेतो एलईडी एक अंतर्निहित निलो डायोड द्वारा संचालित छन् (कृपया नोट गर्नुहोस्, यहाँ २०२० मा, हाम्रो मिडियालाइट प्रो निलो स्पाइक बिना निकट-बै vio्गलेट डायोड द्वारा संचालित छ)। डायोडले फोन्स र ती फस्फोरर्सको मिश्रणमा फोटनहरूलाई निर्देशित गर्दछ, फलस्वरूप, सेतो चम्किलो। जब उच्च-गुणवत्ताका फास्फोरसको मिश्रण केवल ठीक छ, तपाईं र the्ग तापमान प्राप्त गर्नुहुन्छ जुन तपाईंलाई आवश्यक छ मानवीय आँखाले कसरी र sees देख्छ मा आधारित छ।
तपाइँ स्पेक्ट्रोराडियोमीटर अन्तर्गत अध्ययन गरेर प्रकाशको वर्णक्रमीय गुणहरूलाई नजिकबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। सेतो एलईडी बत्तीको टेल-टेल-चिह्न माथिको निलो स्पाइक हो (सबै बत्तीहरूको आफ्नै विशेषताहरू हुन्छन् - टung्गस्टन, फ्लोरोसन्ट, सूर्य प्रकाश, नियन आदि)। यस्तो देखिन्छ कि यसले नीलो बत्तीको परिणाम दिन्छ, यो वास्तवमा हाम्रो एकको वर्णक्रिया हो अति सही एलईडीको। अन्य र colorsहरू balance 6500०० केके रंग तापमान र RI Ra Ra राको सीआरआईमा परिणाम दिन केवल सही ब्यालेन्समा उपस्थित छन्। निस्सन्देह, मापनहरू नियन्त्रित प्रयोगशालाको सेटि andमा लिइएको थियो र एक तटस्थ खरानी कार्डको बाहिर लिइएको छ जसलाई सहि र लगातार पढ्नको लागि आवश्यक छ।
MediaLight Mk2 श्रृंखला को स्पेक्ट्रल पावर वितरण
तपाईंसँग मानकहरू छन्।
हामी के गर्छौं धेरै कठिन वा उत्साहजनक छैन, हामी यसको बारे मात्र धेरै विधिवत छौं, र यसले हामीलाई सहि उत्पादनहरू विकास गर्न मद्दत गर्दछ। जब सम्भावित आपूर्तिकर्ताहरूले हामीलाई सबपेर कम्पोनेन्टहरू पठाए, तिनीहरूले कटौती गरेनन्। पछि शाब्दिक सयौं एलईडीहरू, हामीले आपूर्तिकर्ताहरू भेट्टायौं जसले हामीलाई चाहिएको चीजहरू निर्माण गर्न सक्दछन्। हामीले दूषित हुनबाट जोगिनको लागि उत्तम अभ्यासहरू विकास गर्‍यौं र हामीले किनिरहेका प्रिमियम एलईडीहरू उनीहरूको रंगको तापक्रममा सच्चाइ रह्यो र उनीहरू घुम्न र भेला भए पछि पनि।